Tag: fitadiavana vokatra | Martech Zone
Tag: fikarohana momba ny vokatra
Iray amin'ireo lahatsoratra malaza indrindra nozarainay tamin'ity taona ity ny lisitr'ireo fizahana fizahana tranokala feno. Ity infographic ity dia fanarahana mahafinaritra avy amin'ny masoivoho lehibe iray hafa izay mamokatra infografika tsy mampino, MDG Advertising. Iza amin'ireo singa e-varotra e-commerce no zava-dehibe indrindra amin'ny mpanjifa? Inona no tokony hifantohan'ny marika, ny fotoana, ny angovo ary ny teti-bola amin'ny fanatsarana? Mba hahalalana izany dia nijery fanadihadiana marobe izahay, tatitra momba ny fikarohana ary taratasy ara-pianarana. Hitanay tamin'io fanadihadiana io